Ngwaahịa News |
Kpọọ Anyị: 0086- (0) 792-8322300
3D FRP Sanwichi Panel
3D ntupu N'ime isi
Faiba glaasi ejegharị
BMC (Nnukwu Nkedo Onyinye)
Chopped Strand maka Thermoplastics
Milled faiba glaasi (faiba glaasi ntụ ntụ)
Oghere Glass Microspheres
Chopped Strand ute
Faiba glaasi ahụrụ Strand ute Emulsion Binder
Ntụ ntụ Binder
Kpara Combo ute (Multiaxial Fabric)
Kpara Roving ngwakọta ute
Biaxial Fabric + 45 Celsius -45 Celsius
Biaxial Fabric 0 Celsius 90 Celsius
Triaxial Fabric Longitudinal Triaxial (0 Celsius + 45 Celsius -45 Celsius)
Triaxial Fabric Transverse Trixial (+ 45 Celsius 90 Celsius -45 Celsius)
Quartaxial (0 Celsius / + 45 Celsius / 90 Celsius / -45 Celsius)
Anụ ahụ Mat (ákwà)
Roofing (Mmiri na-egosi)
Pipe Wrapping (Mgbochi imebi emebi)
Faiba glaasi Wall ekpuchi anụ ahụ ute
Fiber S-Glass (Ike Dị Ike)
Ọrụ Carbon eriri
FRP n'Ọnụ .zọ
FRP ite ifuru
FRP mpempe akwụkwọ
3D Sanwichi Panel
Mgbe etinyere akwa ahụ na resin thermoset, akwa ahụ na-amịpụta resin ahụ wee bulie ya elu. N'ihi ihe jikọrọ ya, ihe mejupụtara nke 3D ejiri sanwichi kpara akpa na-etu ọnụ dị elu megide delamination na ụgbụgbọ mmanụ a andụ na ihe ụfụfụ. Ihe bara uru ...
3D faiba glaasi kpara Fabric
site ha na 21-03-09
3-D spacer akwa owuwu bụ echiche mepụtara ọhụrụ. Ejiri akwa akwa nwere njikọ chiri anya site na eriri igwe kwụ ọtọ bụ nke ejiri akpụkpọ anụ mee. Ya mere, 3-D spacer fabric nwere ike inye ezigbo akpụkpọ-isi debonding eguzogide, magburu onwe anwụ ngwa ngwa na superio ...
Faiba glaasi Ejiri eriri
Fiberglass Chopped Strands gụnyere Chond Strands maka BMC, Chopped Strands For Thermoplastics, Wet Chopped Strands, Alkali-Na-eguzogide ọgwụ Chopped Strands (ZrO2 14.5% / 16.7%). 1) .Chopped Strands maka BMC Chopped Strands maka BMC dakọtara na unsaturated polyester, epoxy resin na phenolic resi ...
Waterproof Roofing anụ ahụ ute
site ha na 21-03-02
A na-ejikarị ihe mgbochi anụ ụlọ eme ihe dị ka ihe magburu onwe ya maka ihe mkpuchi ụlọ. Ejiri ya dị ka oke ume ike, mmegide corrosion, nsị dị mfe site bitumen, wdg. Enwere ike ịbawanye ike na ogologo oge na nkwụsị mmiri site na itinye nkwado ...
site ha na 20-12-22
CSM E-Glass Chopped Strand Mat bụ akwa na-enweghị akwa nke nwere ebe a na-ekesa ala na-enweghị atụ na-ejide ya na ntụ ntụ / emulsion binder. Ọ dakọtara na UP, VE, EP, PF resins. Mpịakọta mpịakọta sitere na 50mm ruo 3300mm, ibu arọ sitere na 100gsm ruo 900gsm. Standard obosara1040 / ...
FRP ụzọ / Faiba glaasi Door / SMC Door
China Beihai Faiba glaasi ụzọ (FRP ụzọ) bụ immasely vasatail na ọtụtụ ụdị dị. Nke a na-eme ka ha nwee ike iji ya dịka ọnụ ụzọ ma ọ bụ ọnụ ụzọ ụlọ ịsa ahụ maka ụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ azụmahịa na wdg. N'oge a Fiberglass ụzọ na-aghọwanye ewu ewu na ahịa ụwa na ọtụtụ ụdị func ...
FRP ifuru ite
1.Glass failar mesikwuru ite ifuru bụ ihe siri ike karịa ite ifuru, ọ na-adịgide adịgide karịa ite ifuru. O nwere ike ijide ma kpoo mmiri, mmanụ na mmiri mmiri ndị ọzọ ogologo oge, na-enwe ezigbo nguzogide mmiri. FRP okooko osisi siri ike na udi, gre ...
China Beihai faiba glaasi Co., Ltd.
Copyright - 2005-2021: All Rights echekwabara.